सामसङ ग्यालेक्सी नोट १० आउँदै, यस्ता छन् विशेषताहरु - Dainik Nepal
सामसङ ग्यालेक्सी नोट १० आउँदै, यस्ता छन् विशेषताहरु
दैनिक नेपाल २०७६ साउन २९ गते १८:४७
काठमाडौँ, २९ साउन । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले हालै ग्यालेक्सी नोट १० प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ ।
प्रिमियम स्मार्टफोनहरुको नयाँ लाइन जसले शक्तिशाली प्रदर्शन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रयोगकर्ताहरूलाई हरेक क्षण अविष्मरणीय बनाउन मद्दत पु¥याउँछन् ।
वर्षाैँको लागि, ग्यालेक्सी नोट श्रृंखलाले विश्वभरि लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको चाहनाहरू अनुसरण गर्न र उनीहरूको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ । ग्यालेक्सी नोट १० सँग, सामसङ प्रयोग कर्ताहरुलाई आफूले चाहेको भन्दा बढी गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
‘शुरुदेखि नै ग्यालेक्सी नोटले वेस्ट–अफ–द–वेस्ट प्रविधि एवं सुविधाहरूका साथ प्रस्तुत गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्दै आएको थियो । ग्यालेक्सी नोट १० यसै मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै स्मार्ट फोनका नयाँ पारखीहरुमाझ उनीहरुको प्रोडक्टीभिटी एवं क्रिएटिभिटीलाई सहजै माथिल्लो तहसम्म पु¥याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छ’ सामसङ नेपालका मोबाइल विजिनेश हेड प्रणय रत्न स्थापितले भने ।
ग्यालेक्सी नोट १० का हरेक इलमेन्टहरु विशेष तरिकाबाट निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा ग्राहकलाई अझ धेरै सुविधा प्राप्त हुने छ । ‘भिडियो एडिटिङ्ग गर्न वा आफूलाई मन पर्ने गेम खेल्न ग्यालेक्सी नोट १० ले अझै सहजता एवं सुविधा प्रदान गर्नेछ’ उनले भने ।
ग्यालेक्सी नोट १० को डिस्प्ले सामसङको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट रहेको छ । भौतिक निर्माणदेखि लिएर यसको अन्तरनिहीत प्रविधिको प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मनपरेको टिभि, मुभि तथा गेम खेल्न सक्नेछन् ।
हरेक कार्यलाई बहु पक्षीय उत्पादकबनाउने स्वतन्त्रता
प्रयोगकर्ताहरुले प्रिमियम उत्पाकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले आफ्नो फोनबाट अझै धेरै कुरा प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधि, सुधारिएको क्षमता र शक्तिशाली समायोजन आदिले प्रयोगकर्तालाई स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरुका हरेक कार्यलाई उत्पादक बनाउने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ ।
ग्यालेक्सी नोट १० को साथ, सर्जकहरुले स्टेट अफ द आर्ट टुल्सहरुको प्रयोग गरी आश्चर्यजनक भिडियो तथा फोटोहरु लिन सक्नेछन् ।
जसदृ आफ्नो च्यानलहरु, स्टोरीहरु तथा पोस्टहरुलाई अरु भन्दा पृथक बनाउने सुविधा प्रदान गर्दछ । यसमा भएको एड्भान्स इमेजिङ्ग प्रविधि र सफ्टवेरहरुले भिडियोग्राफि र फोटोग्राफिलाई नयाँ तहमा पु¥याउन मद्दत गर्दछ ।
ग्यालेक्सी नोट १० ले इकोसिस्टमलाई केन्द्रमा राखेको छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई जीवन्तता प्रदान गर्न विभिन्न वेरेवल डिभाइसहरु जस्तै : ग्यालेक्सी वाच एक्टिभी २ र ग्यालेक्सी ट्याव्लेट ए ६ कनेक्ट गरी अझै धेरै गर्न सकिन्छ ।
सामसङका यस्ता उत्पादनहरु जसले ग्यालेक्सीको अभूतपूर्व अनुभव प्रदान गर्दछ । सामसङ हेल्थले स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरुलाई निगरानी राख्दछ ।
सामसङको Knox ले फोनका डाटा एवं सुरक्षा प्रदान गरी सुरक्षा समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ । Bixby ले प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सहजता प्रदान गरी जीवनलाई व्यवस्थित एवं अझै सहज बनाउने छ ।
ग्राहकले ग्यालेक्सी नोट १० तथा ग्यालेक्सी नोट १०ं फोन रु ५००० को डिपोजिट गरी प्रि बुकिङ्ग गर्न सक्नेछन् ।
ग्यालेक्सी नोट १० को मूल्य रु. १ एक १६ हजार तथा ग्यालेक्सी नोट १०ं रु. १ लाख ३५ हजार तोकिएको छ । यी दुबै सेटको प्रि–बुकिङ्ग यही अगस्ट महिनाको १२ तारिखदेखि २३ तारिखसम्म खुल्ला गरिएको छ ।
Galaxy नोट १० AuraBlack, Aura Glow तथा Galaxy नोट १० + Aura Black, Aura Glow, Aura White गरी विभिन्न आकर्षक रंगमा उपलब्ध छ ।
यसका अतिरिक्त प्रि बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुले निःशुल्क रुपमा Galaxy Buds वा रु १२ हजारमा Galaxy Active Watch वा रु १२ हजारमा २४ इन्चको Curved Monitor मध्ये कुनै एक छनौट गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसका अतिरिक्त प्रि–बुकिङ्ग गर्ने ग्राहकहरुले GalaxyGifts पनि प्राप्त गर्नुहुने छ । ती Gift देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
–टर्किस एयरलाइन्सको टिकट खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
–KGH ग्रुपकाहोटलका रुमहरुमा रु. ५००० सम्मको छुट
–बयोदा हस्पिटलमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट
–लेट मिइन को सेवामा २० प्रतिशतसम्मको छुट तथा
–एस ट्राभल्समा १० प्रतिशतसम्मको छुट ।
सामसङले प्रि–बुकिङ्गमा सहभागी भएका व्यक्तिहरुलाई लक्की ड्रमा समावेश पनि गर्ने छ । प्रथम हुने भाग्यशाली विजेतालाई टर्किस एयरको सेवा भएको देशमा आउने जाने टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो विजेताहरुले GalaxyWatchActive प्राप्त गर्नेछन् भने चौथो र पाचौँ हुने व्यक्तिहरुका दम्पतीलाई हिमालयन फ्रन्र्टमा २ रात बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैगरी छैठौँ विजेताले लेट मिइनको रु ५००० बराबरको दुई वटा कुपन प्राप्त गर्नेछन् ।